Dharcad ka tirsan NISA oo laga saarayo garoonka diyaaradaha | KEYDMEDIA ONLINE
Dharcad ka tirsan NISA oo laga saarayo garoonka diyaaradaha
Askar ka kala tirsan ciidamada Waran iyo Gaashaan, oo qeyb ka ah NISA, ayaa saldhig ku leh garoonka diyaaradaha, kuwaas oo si gaar ah ula shaqeeya Saraakiil Mareykan ah, amarka Wasiirka Amniguna, wuxuu u muuqday inuu ku wajahnaa ciidankaas.
MUQDISHO, Soomaaliya - Loollanka siyaasadeed ee ka tagan Madaxtooyada Soomaaliya, ayaa u muuqda inuu ku fiday garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, oo ah marinka duullimaad ee ugu muhiimsan dalka, halkaas oo shanti sano ee la soo dhaaday ay dhibaatootin kala duwan ka geysteen Kooxda Fahad Yaasiin hoggaamiyo.
Waraaq Sabtigii ka soo baxday xaafiiska, Wasiirka Amniga Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Cabdullahi Maxamed Nuur, ayaa lagu amray hoggaanka hay’adda Nabad-sugidda iyo Sirdoonka Qaqanka, inay mas'uuliyadda amniga garoonka ku wareejiyaan Booliska dibna u soo celiyaan wixii askar ah ee NISA, ka jooga Aadan Cadde.
Sida ay caddeynayan xogo muhiim ah, go’aanka Wasaaradda Amniga ayaa yimid kadib markii, Wasiirka Gaashaandhigga iyo Wasiirka Amniga, ay amar diiddo kala kulmeen saraakiil dhar-cad ah oo NISA u qaabilsan garoonka, xilli ay Wasiirradu garoonka u joogeen soo dhaweynta mid ka mi ah Madaxda Maamullada oo ka qeyb galaya shirka Golaha Wadatashiga Qaran.
Todobaadkii hore, warar hoose, oo lagu kalsoonaan karo, waxa ay sheegeen, in taliyaha Hoggaanka Dabagalka Siyaasiyiinta NISA, Cabdullahi Daahir oo loo yaqaan Cabdullahi Dheere, uu ka badbaaday dil qorsheysan xilli uu ku suganaa garoonka diyaaradaha, taas iyana qeyb ayay ka tahay sababihii keenayay go’aanka.
Cabdullahi Dheere, wuxuu muddo dheer ahaa garabka midig ee Agaasimihii hore ee NISA, Fahad Yaasiin, hayeeshee, kala aragti-duwaan salka ku heysa iska-dhac isaga iyo Cabadullahi Kullane, oo ah sarkaal awood badan ku dhex leh NISA, ayaa sababtay inuu noqdo gooni-socod, si ka duwan hoggaanka Hay’adda ula shaqeeya Xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
Wax yar kadib markii baraha bulshada lagu faafiyay Amarka Cabdullahi Maxamed Nuur, Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho, ayaa isla-markiiba, xiriirro la sameysay Xaafiisyada Ra’iisul Wasaaraha iyo Wasiirka Amniga, waxayna walaac ka muujiyeen tallaabada Nabad-sugidda looga saarayo garoonka diyaaradaha.
Tallaabadaas, waxa ay horseedday, in Wasiirka Amniga uu caddeeyo u jeeddada waraaqda uu amarka ku bixiyay, taas oo uu ku macneeyay in Isbedelka la xiriira Ciidamada NISA ee ka howlgala Garoonka Aadan Cadde kaliya quseeyo ciidamada Dharcadda ah ee ka hawlgala Gudaha Garoonka (Terminal ka), taas oo ka dhigan in Ciidamada gacanta ku haya Baraha Koontoroolada ay shaqadooda sii wadan doonaan.
NISA waxay ku lahayd Garoonka awood badan, waxaana xilliyo badan la hor istaagay shaqsiyaad doonayay in ka baxaan Caasimadda, halka ay horay isaga dhago tireen amar ka soo baxay RW Rooble, oo ahaa in aan qofna laga hor istaagi karin socdaalkiisa.
Waxa ay ku lug yeesheen dhowr dhacdo, oo hadal heyn xooggan abuurtay, halka Wasaaradda Amnigu sheegtay in saraakiisa NISA, ee dharcadka ah ee ku sugan garoonka laga soo gudbiyay dacwo la xariirta adeegsiga awood ciidan si sharci darro ah.
Dhanka kale, dhamaan saraakiisha Nabad-sugidda ee afartii sano e ee la soo dhaafay, la shaqeynayay Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ayaa baxsad ah, taas oo keentay in dadka qaar qorshaha Wasaradda Amniga ku macneeyaan in Xukuumaddu doonayso in ay hor istaagto saraakiisha la tuhunsan yahay.